hernia Spinal - uhlobo we akwazi ukugcina intervertebral, lapho ethola khona aphume ashone noma awela umsele umgogodla. Izimpawu eyinhloko lesi sifo yilabo: ukuqina, ubuhlungu acute nokuphatheka kabi jikelele nomgogodla. Lapho izimpawu ezinjalo kufanele xhumana nodokotela uphethwe nokuzimisela yokwelashwa. Omunye izinqubo kungaba ukutshopa ngoba hernia umgogodla (isithombe kuboniswe kulesi sihloko).
Umthwalo oyinhloko ewela lumbar nomgogodla, ngakho okuvela hernia kule umnyango okungenzeka kakhulu njengoba kungenzeka ukuthi avele yomgogodla wesibeletho thoracic. babonakala bethambekele kakhulu ukuvela lesi sifo kubantu abangu abaneminyaka engu-25 kuya ku-50. Abantu abadala, Isimanga siwukuthi, mancane amathuba okuthi yilesi sifo. Lokhu kungenxa izinguquko ezihlobene nokukhula - akwazi ukugcina intervertebral babé kancane ephathekayo.
Ukuhlinzwa noma ukutshopa?
Lapho sitholakele "hernia umgogodla" ngezinye izikhathi uthola lokuzikhethela phakathi nokuhlinzwa kanye indlela yokwelapha. ukwelashwa Steel kunikezwa iziguli kuphela esimweni lapho hernia kubangela ubuhlungu obuhlabayo ukuze isiguli ilahlekelwa motor imisebenzi, ubuhlungu ezimweni ezibucayi kuholela incontinence. Kwezinye izimo, iziguli kuyabekwa zokwelapha okuhloswe ngalo ukuqeda ubuhlungu, emgogodleni yokutakula futhi imisipha izicubu esimweni esivamile. I-acupuncture ngoba hernia umgogodla ongaxazulula kokubili: kusombulula tinkinga.
Umsuka futhi ngokuyisisekelo ukutshopa
I-acupuncture noma ukutshopa - ke ingenye yezindlela ukunqandwa kwezifo eminingi yasendulo futhi kungase kutholakale. Lokhu legatsha imithi eladabuka China futhi kusekelwe ulwazi anatomy zomzimba womuntu, kanye efanele yangaphakathi izitho amaphuzu emzimbeni. herniated umgogodla ukwelashwa ukutshopa ingafinyelela Imiphumela esiphezulu lapho udokotela onekhono, kanti isiguli livulekele lolu hlobo imithi. Inqubo kuyinqubo yokuchayeka izinaliti elincanyana phezu kwesikhumba lesiguli. Positive Imiphumela ukwelashwa kakhulu kubangelwa "Ukuphendula" amaphuzu asebenzayo emhlabeni emgogodleni yokwesatshiswa zangaphandle. Kuze kube namuhla, lo mshini wezenzo kokutshopa ibingakazeki. Ezinye izifundo zokwelapha luye lwabonisa ukuthi umphumela ukutshopa akuxhomekile endaweni noma inalidi Ukungena ukujula, kodwa lo mphumela kunomphumela omuhle nesineke.
I-acupuncture nemithi yesimanje
Esikhathini umkhuba yesimanje ezikhungweni zezempilo kungaba ngokuvamile ukuthola inqubo "ukutshopa" - ke akulutho, efana ukutshopa. Lapho hernia umgogodla ungafaka isicelo iqoqo izinqubo ngaphezu ukutshopa: ukutshopa, massage, ukuqondiswa kwamathambo nezinye ukwelashwa Physiotherapy. Indlela eqotho unika imiphumela emihle kakhulu.
Izici isicelo kokutshopa
hernia umgogodla - isifo kubangelwa nga the sedentary, noma, Ngakolunye uhlangothi, yokuphila futhi esebenzayo, ukuhlukumezeka, isifo emgogodleni, umzimba kahle. I-acupuncture ngoba hernia umgogodla kuhloswe ikakhulukazi ekunciphiseni ubuhlungu kanye ukumisa ukuvuvukala. Ngemva nokuqedwa lezi zimpawu Uchwepheshe ungaqala ukwelashwa nomnyombo sifo, ukugwema ukubonakala umbhunu esikhathini esizayo.
Izinzuzo ukutshopa ngoba hernia umgogodla
Umthelela on the amaphuzu asebenzayo yomzimba kunomthelela omuhle empilweni yomuntu. Lapho usebenzisa i-ukutshopa indlela ingafinyelela Imiphumela ezifana:
ekuqedeni imisipha spasm, okuyinto eyenzeka ngenxa ushintsho isikhundla disc noma babancwebe;
ukusebenza kwalapho, okuyinto nakanjani kuthinta ithoni kwemisipha yomzimba futhi ugwema ukonakala futhi yokujama tsi endaweni yomgogodla;
ekuqedeni voltage umthwalo phezu disc intervertebral;
nokuqedwa izimpawu ubuhlungu.
engashiyi nomthelela emzimbeni;
ukugwema emuva ukuhlinzwa ;
abantu ababhekene nalesi sifo ngokwa;
ukutshopa ngesikhathi esifanayo kuthinta isimiso sezinzwa futhi kwemisipha umuntu, normalizes kwegazi futhi umzimba.
Umzimba womuntu liqukethe izitho, amathambo, imisipha, isikhumba nezinzwa. Uma uyikha phezulu le umzimba eziningi amaphuzu asebenzayo ukushukuma okuyinto Kuvuselela imisipha nezinzwa. Umthelela ngala maphuzu ukunikeza massage abelaphi, kuyilapho ukubhucungwa kukhona umthelela ethintekayo kulezi zindawo. I ukutshopa kubalulekile ukwazi kahle ukuthi iphuzu uthathe isinyathelo. Esimisweni, onguchwepheshe umjovo emzimbeni wesiguli isikhala esidingekayo oyenza inqubo yokutakula zomzimba. Kakade emva kokwelashwa kuqala ubuhlungu zingancishiswa, kodwa inqubo yokwelapha kungenzeka ibe yinde.
Esanda kutholakala, indlela entsha kokutshopa usebenzisa zamanje omnene kagesi. I lwamanje yanikezwa izinaliti kusukela umthombo wamandla, udokotela angase ulungise imvamisa yayo futhi ngamandla abo. Nale nesineke indlela ukutshopa uzizwa ukuluma inaliti kuqala, bese kuba ndikindiki okuncane, ubuhlungu kanye imfudumalo. I-acupuncture usebenzisa yamanje kancane kunokuphakela ukutshopa bendabuko. Isikhathi kwelashwa kusuka imizuzu engu-15 kuya kwangu-90.
Izimo for ukutshopa
Kokungenela yezokwelapha has Izimo yayo, kuhlanganise ukutshopa ngoba hernia umgogodla. Izimo for ukutshopa ezimbalwa, lezi zibandakanya: sokukhulelwa, ukuya esikhathini izifo dermatological, immunodeficiency uthi, onkozobolevaniya, izifo sibi ezithathelwanayo.
Emhlabeni wonke amakhulu ezinkulungwane zabantu wasebenzisa amasevisi ongoti ukutshopa. Abaningi balekelela ukutshopa ngoba hernia umgogodla. Izibuyekezo amakhasimende esibonga Akuthathanga sikhathi.
I jikelele kuqashelwe ukuthi ukutshopa kudinga izikhathi. Ekuqaleni, isiguli singase afikelwa ukwesaba ngenxa yobuningi metal izinaliti nimkhiphela umzimba wonke. Ngakho-ke, le nqubo kumele iqhutshwe izikhungo ezisemthethweni yezokwelapha ezingaba ukuqinisekisa inzalo izinaliti futhi udokotela abaqeqeshiwe. Abaningi besaba imijovo ngakhoke ugweme ukutshopa, kodwa kusukela ubuhlungu lwenalidi Ukungena ukutshopa kunemibandela kakhulu.
Phakathi nesimiso eziningana isikhumba lesiguli proklyvayut izikhathi eziningi, kodwa isilonda uhlala. I izinaliti musa ibhoboze isikhumba kahle, futhi screwed kuwo. Ngemva ukutshopa uhlala ububomvu, okuyinto sidlula amahora amaningana. Umthelela ukutshopa kungase kwenzeke phakathi nesimiso ezintathu zokuqala, futhi lesi sifo kokugcina cishe ashona.
Sisebenza kahle kangakanani ekwelapheni herniated ukutshopa umgogodla? Iziguli namazwana ikakhulukazi omuhle. Kodwa bakhona labo okungelayo leli inqubo akamsizanga. Ngakho-ke, ngeke ukwazi ukunikeza impendulo amaphesenti ayikhulu. Odokotela enamathela izindlela zesintu yokwelashwa, njengesibusiso engeyinhle kakhulu (noma nje engenamsebenzi). Ngakolunye uhlangothi, iziguli eziningi ukubika ngcono eziningi esimweni sayo. Abanye bakholelwa ukuthi ukutshopa kuyinto nomphumela placebo.
Okhalo ukuvuvukala imbiza iqoqo
Renaissance imidwebo. Ukudala abaculi Italian Yenguquko
Ubulili Kuwo Wonke Owesifazane?